Greater Bogotá Convention Bureau: Mushandirapamwe mutsva wekuratidzira Simba reVanhu
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Colombia Breaking News » Greater Bogotá Convention Bureau: Mushandirapamwe mutsva wekuratidzira Simba reVanhu
Nhau Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Colombia Breaking News • tsika nemagariro • Musangano Weindasitiri Nhau • nhau • Technology • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo
Mukucherechedza Zuva reMagungano Emusangano Wepasi Pose, BestCities Global Alliance nhasi yazivisa nzira inonakidza yekutaurirana icharatidza Simba reVanhu. Ichitungamirwa neGreater Bogotá Convention Bureau, iyo ichagamuchira BestCities 2018 Global Foramu muna Zvita 9-12, hofisi iyi yakagadzira mushandirapamwe une chinangwa chekupemberera rakasarudzika basa rinoitwa nevanhu mukuita shanduko huru uye kufambira mberi mumisangano uye indasitiri yezviitiko.
Pamwe chete padhuze nedzimwe gumi nenhatu dzeBestCities, Bogotá ichave ichiratidzira dingindira repamusoro regore rino reGlobal Forum mune yekudonha-yekudyisa dhijitari dhizaini iyo ichaita mapoinzi ekubata pasirese. Ino ichave iri nguva yekutanga mubatanidzwa kuburitsa dingindira kubva pachiitiko chavo chegore rose kune vateereri vakawandisa kuburikidza nezano rakanangwa iro rinozoona maguta ese achigovana meseji yakabatana.
Sangano iri rinopa kunzwisisa chaiko uye zvinoreva kune vane simba vanhu mukati meindasitiri iyo inokwanisa kuita shanduko. Mumakore maviri apfuura, iyo BestCities Global Foramu yakatarisa zvinoitwa nenhaka uye kukosha kwekuvaka mabhiriji etsika. Gore rino, mubatanidzwa unoda kuona kuti vanhu vari musimboti wezvose.
Chikamu chekutanga chemushandirapamwe chichaona ese gumi nemaviri emaguta eBestCities anoshanda, anosanganisira Berlin, Tokyo, Vancouver, Madrid, Houston, Singapore, Melbourne, Dubai, Bogotá, Copenhagen, Edinburgh neCape Town, vanogovana mifananidzo ine simba inoratidza izvo Simba zveVanhu zvinoreva kwavari.
Linda Garzón Rocha weGreater Bogotá Convention Bureau akati: “Tinotenda zvakasimba kuti munhu wega wega ane simba rekuita shanduko yakakosha inogona kuumba ramangwana nekuita shanduko yakanaka. Vanhu ndivo musimboti weiyi indasitiri, uye iyi indasitiri mudziyo wekuwana zvakakura uye zvakakura zvinokanganisa. Semubatanidzwa tinoda kuratidza simba rechokwadi revanhu vari mairi uye tinotenda kuti mushandirapamwe uyu uchatibatsira kuita izvi. ”
Paul Vallee, Managing Director weBestCities Global Alliance akati: “Isu tinogara tichiita zvese zvatinogona kuti tione kuti dingindira reGlobal Forum yedu iri pamusoro wenyaya wakakosha saka tinofara kuve nechiitiko chegore rino chakanangana nePower of People. Meseji yatinoda kutaura ndeyekuti vanhu vanogara pamoyo weiyi indasitiri uye kuburikidza nemushandirapamwe uyu tinotarisira kuvhenekera kutarisisa kune vakawanda vanokurudzira avo vari kushanda kunatsa indasitiri, zviitiko nenhaka zvatiri kugadzira. Simba reVanhu dingindira rakafara rine zvirevo zvakawanda uye tinofara kuve nezano ratiri munzvimbo yekugovana maonero edu pane zvazvinoreva kumaguta gumi nemaviri akanak kwazvo pasirese.
Chikamu chekutanga chemushandirapamwe chichaitwa kubva musi wa12 Kubvumbi kusvika 14 Chivabvu nechikamu chepiri chichaziviswa munguva pfupi inotevera.
Chikwata cheBestCities uye maguta ekubatirana achange aripo pagore rino IMEX Frankfurt. Rumwe ruzivo nezvezvinofanira kutarisirwa kubva kuGlobal Forum ino inoitika muBogotá muna Zvita ichavhurwa pakudya kwemangwanani neChipiri 15 Chivabvu paMaritim Hotel Frankfurt, iri padyo neMesse Frankfurt.
Gurukota Rezvekushanya Vanosangana neSeychelles Kugamuchira Vaeni uye ...
Guam's Mhepo V & V Chirongwa chakagadzirira kusimuka
Akawanda ekuputika dombo repakati Moscow, kukuvara ...
Grand Canyon muOman inowedzera Thai Hospitality ne ...
Budapest Airport: Yechipfumbamwe Runway Run iri!
Nyika yeJamaica mukati meCaribbean Tourism uye nzira ...
Roma Ine Dhorobha Idzva: Isina Kupedzwa Project ye ...
Ndeapi mapaki emunyika eUS anonyanya kufarira mhuri?
France inozivisa COVID kupfuura kwemabhawa, maresitorendi ...
Rekodha Kudiwa Kune Yakavanzika Jet Ndege Kuenderera Tumira ...
OTDYKH Leisure Fair 2021 Ichaitwa muMoscow ...
Russia inotangazve US, Italy, Belgium, Bulgaria, Jordan ...
NASA nzira yekurwa neDutu Gobally
Rufu Tourism: Kufamba uine chinangwa
Njodzi Tourism isingabvumirwe muHolland: Hakuna nzvimbo yakachengeteka
US Kufamba Inogamuchira Chirevo chaBiden Pakusimudza ...
Kuputika kukuru kwematombo muDhailand
Uganda Inodzora Nyama Yekutengesa Zvemagetsi ...
Mutungamiri weHaiti neMukadzi Wekutanga vakaurayiwa pakurwiswa ...